पिपलमा जल किन चढाउने – Nepali jyotish – no. 1 Online Nepali Astrology website
Home Blog धर्मशास्त्र
December 26, 2021 / 249 / 0
पिपलमा जल किन चढाउने ?
हिन्दु धर्मावलम्वीहरुले पिपलको रुखमा पानी चढाउने र पूजा गर्ने गर्छन । यो पुरानो मान्यता,आस्था र विश्वास हो । पिपललाई धार्मिक, पौराणिक, आयुर्वेदिक एवम् वातावरणीय दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ । हिन्दु धर्मावलम्बिले पिपलको वृक्षलाई विष्णु भगवानको प्रतिक मानेर पुजा गर्छन् ।
हिन्दु धर्मावलम्वीहरुले पिपलको रुखमा पानी चढाउने र पूजा गर्ने गर्छन । यो पुरानो मान्यता आस्था र विश्वास हो । शनिबार पिपलको परिक्रमा, पूजा गर्नु, दियो बाल्नु तथा जल चढाउनु अति नै शुभ मानिन्छ। धर्मशास्त्रमा वर्णन भएअनुसार पिपलको पूजा विषेश शनिबार बिहान गर्नुपर्दछ ।पुराणमा भनिए अनुसार समुन्द्र मन्थनको समयमा देवी लक्ष्मी भन्दा अगाडि उनकी दिदी अलक्ष्मी उत्पन्न भईन्, र पछि लक्ष्मी आइन् । अनि देवी लक्ष्मीले श्रीविष्णुको रुप धारण गरिन्, यसबाट अलक्ष्मी रुष्ट बनिन्। यस्तो देखेर श्रीविष्णुले अलक्ष्मीलाई आफ्नो प्रिय वृक्ष (बासस्थान) पिपलको वृक्षमा बस्ने आदेश दिए र भने यहाँ तिमी आराधना गर ।
म समय समयमा तिमीलाई भेट्न आइरहन्छु साथै देवी लक्ष्मीले पनि भनिन्, म प्रत्येक शनिबार तिमीसँग भेट्नको लागि पिपल वृक्षमा आउने गर्छु। भनिन्छ यही कारण शनिबारका दिन श्रीविष्णु र देवी लक्ष्मी पिपलको वृक्षमा बस्ने गर्दछन् । त्यसैले शनिबारको दिन पिपलको वृक्षको पूजा गर्नु, बत्ती बाल्नु तथा जल वा तेल चढाउँदा वा परिक्रमा गर्दा पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास छ। साथै धन-धान्यको पनि वृद्धि हुन्छ भन्ने विश्वास छ। भक्तजनको यही विश्वासका कारण नै शास्त्रमा पिपललाई देव वृक्ष भनिएको छ ।
गीतामा भगवान श्रीकृष्णले त पिपलको वृक्षलाई स्वयम् आफ्नो रुप बताएका छन् । पिपलको पूजा गर्यो भने एकसाथ सबै देवताहरुको पूजा गरेको फल प्राप्त हुन्छ । वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट पनि पिपललाई पुजनिय मानिन्छ । किनकी यो यस्तो वृक्ष हो जसले गर्मीमा शितलता प्रदान गर्दछ र जाडोमा तातो हावा निकाल्दछ।
पीपलको बृक्षको आसपासमा रहदा नै यसको विशेष फल प्राप्त हुने र बिहानको सुर्योदय भन्दा २ घडि (४८ मिनेट) अगाडिको समय उपयुक्त मानिने हुनाले यो समयमा जल चढाउँदा उत्तम फल मिल्छ।
पीपलमा जल चढाउँदा भन्ने मन्त्रः-
अग्रतः शिवरूपाय वृक्षराजाय ते नमः।।
नाग शिर विचार (शिलान्यास, जग र...